Xuska Cawke Iyo Xiisaha Ciyaartii Warbaahinta Dalka : SalaanMedia
Burco (Salaanmedia.com)_ Suxufiyiinta Warbaahinta dowlada ayaa rigoodhayaal kaga badiyey kooxdii saxaafadda Maddaxa bannaan ee Somaliland, kulan ciyaareed aad u xiiso badan oo labada kooxood ku dhex maray geggida Hargeysa Stadium galabnimadii Jimcaha.
Kulankan ay sida wadda jirka ah u soo qaban qaabiyeen, xidhiidhka kubadda cagta iyo ururka Suxufiyiinta Somaliland ee ‘Solja’, laguna xusayay Allah Ha u Naxariistee, Saxafigii qiimaha badnaa, marxuum Wariye Axmed Xassan Cawke, ayaa ku dhamaatay daqiiqadihii caadiga ahaa barbar dhac 2-2 ah, waxaanay labada kooxood ku kala calaf qaadeen rigoodhayaal, ay guushu ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca saxaafada Dowladda.
Qaybtii hore ee ciyaarta, waxaa maamulka garoonka iyo gacan ku haynta kubadda ku awood badnaa kooxda Saxaafadda madaxa banaan, kuwaas oo suurto galiyey inay hogaanka ciyaarta ku qabtaan 1-0 uu u saxeexay weeraryahan, Naasir Aadan ( Nawaa), waxaana lagu kala nastay 1-0.
Markii la isugu soo noqday qaybta dambe, Markale weeraryahan Nawaa ayaa kooxdiisa u sii dheereeyey hogaanka, waxaanu shabaqa ku hubsaday goolkii labaad, laakiin, wixii intaas ka dambeeyey, jawigii ciyaartu wuxuu gebi ahaanba u jan-jeedh samay dhinaca kale, waxaana miciyo libaax la soo baxay kooxda Saxaafada Dowladda.
Maxamed Soomaali oo afka hore uga ciyaarayay Suxufiyiinta Dowlada ayaa dhaliyey goolkii rajada u soo celiyey kooxdiisa, waxaanay sii wadeen weeraradii aan kala go’a lahayn ee ay ku ekaynayeen goolka Warbaahinta Madaxa banaan.
Dhamaadkii ciyaarta, garsoorihii ciyaarta dhex- dhexaadinayay wuxuu rigoodhe u qabtay Warbaahinta Dowlada, kadib markii ay difaaca ciyaaryahanada Saxaafada Madaxa bannaani gacan ku qabteen kubad weerar ahayd oo ku socotay shabaqooda, waxaana rigoodhahaas gool u bedelay, ciyaartana ka dhigay barbar dhac 2-2 ah, wiilka goolka koobaadna saxeexay ee Maxamed Soomaali, ciyaartuna waxay ku dhamaatay 2-2 daqiiqadihii loogu talo galay inay socoto.
Ciyaartan oo ka sokow dadweynihii garoonka soo camiray ay kala qayb galeen daawashadeeda, masuuliyiin ay kamid yihiin, Wasiirka wasaarada Dhalin yarada iyo ciyaaraha, wasiir xigeenka wasaarada Warfaafinta dhaqanka iyo Wacyi galinta iyo gudoomiyaha Ururka suxufiyiinta Somaliland, si loo kala saaro labada kooxood mida koobka gudoomaysa, waxaa sidii caadada ahayd loo dhigay rigoodhayaal.
Saxaafada Dowlada ayaa ka faa’iidaysatay oo saddex rigoodhe dhashada, laba kaliyana ka khasaariyey laadadkii shanta ahaa ee loo dhigay, halka warbaahinta Madaxa banaan xidigohoodu ay ka dhashadeen laba saddex kamid ahna ay iska khasaariyeen.
« Gobalka Hawd Oo Deeqdii Ugu Balaadhneyd Ku Wareejiyey Ciidamada Qaranka Somaliland + [Muuqaal]
Daawo Muqaal:Dood Xeerka Guurka Somaliland Caqabdaha Guurka Ajaanibka..May 03.18 »